आजको राशिफल | Purnapusti Khabar
वि.सं. २०७६ भदौ ४ गते बुधबार, इ.स. २०१९ अगस्ट २१, ने.सं. ११३९ गुँलागा, भाद्र कृष्णपक्ष सप्तमी तिथि
मेष राशि हुनेहरुको आजको दिन अवसर प्राप्त भए पनि भेटघाटले अलमल्याउन सक्छ । लगनशीलताले नयाँ नयाँ काम गर्ने अवसर प्रप्त हुने छ । विवादास्पद कामको जिम्मेवारी लिनाले धन लाभ भएपनि अत्मसम्मानमा बाधा हुने छ । स्वास्थ्यका लागि खर्च बढ्ने योग रहेको छ ।
बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बा)
यो राशी हुनेहरुको लागि आजको दिन खर्च बढाउनेछ । विश्वासमा धोका पाईएला । काम बढी गर्नु पर्ला । व्यापारमा लगानी बढी नाफा कम हुने छ । अवसरवादीहरूबाट सजग रहनुहोला ।
यो राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन अवसरका साथै आम्दानीका स्रोत फेला पर्नेछन् । श्रमको उचित मूल्यांकन हुनेछ । पढाइमा ध्यान जाने छ । प्रतीक्षा गरेको नतिजाले उत्साह जगाउनेछ । व्यापारमा थोरै लगानीबाट राम्रो नाफा लिन सकिने छ । नयाँ कामतर्फ अग्रसर हुने योग रहेको छ ।
कर्कट राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन तारिफयोग्य कामले चर्चा होला । प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको सहयोग जुट्नाले सजिलै लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ । पुरानो मित्रताले प्रेम सम्बन्ध कायम होला । दिगो काममा जग बसाउने अवसर आउने छ ।
यो राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन आफ्नो क्षेत्रमा अरूले हस्तक्षेप गर्ला । आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिदा राम्रो होला । मिहिनेतले उपलब्धिको स्रोत भेटाईने छ । योजना पूर्ण नभए पनि आंशिक लाभ हुनेछ ।
कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पा)
यो राशि हुनेहरुको आजको दिन सानातिना समस्याले केही अप्ठ्यारो बनाउला । स्वास्थ्यमा समस्या आउला चुनौतीपूर्ण कामको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला । आकस्मिक समस्याले दौडधुप गराउन सक्छ ।
यो राशि हुनेहरुको आजको दिन बसुन्दर पहिरन, आकर्षक व्यक्तित्व र राम्रो कामले नाम कमाउन सकिएला । उपहार प्राप्त होला । घुमफिर तथा मनोरञ्जनको योग रहेको छ । मित्रता र प्रेमको बन्धन बलियो हुनेछ ।
बृश्चिक राशि हुनेहरुको आजको दिन शत्रुहरू स्वत किनारा लाग्नेछन् । प्रतिस्पर्धामा विजयी प्रप्त हुने छ । स्वास्थ्यमा सुधार अउनुका साथै काममा उत्साह जाग्नेछ। मिहिनेतले प्रशस्त फाइदा हुने छ । दिगो आर्थिक लाभ हुने र नयाँ योजना शुभारम्भ गर्ने योग रहेको छ ।
यो राशि हुनेहरुको आजको दिन अवसरले प्रप्त होला । प्रतीक्षा गरिएको नतिजा कमजोर देखिनेछ । साथ सहयोग टाढिने छ । अध्ययनमा गुरुजनको मार्गदर्शन अवलम्बन गर्दा फाइदा होला । मिहिनेत गरे केहि काम बन्न सक्छ ।
यो राशि हुनेहरुको आजको दिन नियमित काम सम्पादन हुने छ । थोरै पारिवारिक मतभेदले व्यवधान निम्त्याउन सक्छ । अनावश्यक नाता जोड्ने देखि टाढा रहेको राम्रो । नबुझि नबोल्नु होला । महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक नगर्नुहोला ।
यो राशि हुनेहरुको आजको दिन छोटो समयमा विशेष उपलब्धि हात लाग्नेछ । विभिन्न स्रोत साधन प्राप्त होला । गरेका कामको राम्रो नतिजा पाईएला । रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने योग रहेको छ । शत्रु र प्रतिस्पर्धीलाई सजिलै हराउन सकिनेछ । नौलो प्रकृतिको काम शुभारम्भ गर्ने अवसर आउने छ ।
मीन राशि हुनेहरुको आजको दिन आत्मविश्वासको साथ काम गर्नु होला । वादविवादबाट टाढा रहनुहोला । पैसाको समस्याले केहि काममा बाधा पुग्ला । गोपनीयतामा ध्यान दिनु होला । मिहिनेत गर्नाले भविष्यमा नाम र प्रतिष्ठा मिल्ने योग रहेको छ ।